Mmemme Mgbakwunye Weebụ Pụrụ Ikike Maka Ụlọ Ọrụ Gị Dịka Ihe Omume
Ma ị ghaghị iji data maka azụmahịa gị, nyocha ma ọ bụ ọrụ, ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịchere ibe maka ibu ọrụ na Netscape Navigator ma ọ bụ Internet Explorer. Mgbe ị na-egwugharị na ịntanetị, ị nwere ike iche nsogbu nke njikọ dị nro ma nwee ike ida ọtụtụ data ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-elele ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog dị egwu na ọtụtụ puku peeji nke, ị ga - enwe ike ịpịgharịa ugboro ugboro iji nweta peeji ndị ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Obi dị m ụtọ na ihe omume weebụ wepụtara pụrụ iche na-eme ka ọ dịrị gị mfe ibufee saịtị kacha amasị gị n'enweghị nsogbu ọ bụla - google www google. Onye na-ewepụta weebụ bụ otu usoro nke na-enyere ndị nchọpụta, ndị nta akụkọ, ụmụ akwụkwọ, ndị ọchụnta ego, na ndị ahịa aka iwepụta data n'ụzọ dị mfe ma na-ele ibe weebụ dị iche iche dị elu. A kọwara ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya ebe a.
SurfOffline bụ otu n'ime ndị nchịkọta weebụ kachasị mma na ndị a ma ama na ịntanetị. Site na ngwá ọrụ a, ị nwere ike ikpebi ọtụtụ ihe ị ga-achọ ibudata, ọ nweghịkwa oke na ọnụ ọgụgụ nke ibe a ga-ewepụta. Ọzọkwa, ị dịghị mkpa FTP na ebe nrụọrụ weebụ gị iji budata data ahụ. Ngwaọrụ a jikọtara Windows, Vista, XP na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ.
2. Extractor e-mail:
Ọ bụ otu n'ime mmemme ntinye akwụkwọ weebụ kachasị mma na ndị a ma ama. EXtractor bụ ezigbo ma ndị programmers na ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri na-eme ka ọchụchọ gị dị mfe na ngwa ngwa. Ị nwere ike ibudata weebụsaịtị ma ọ bụ akụkụ ya niile site na iji ngwá ọrụ a dị ike..A maara maka njirimara enyi na onye ọrụ nchịkwa na-enyere gị aka ịhazi na ịhazi ihe ọ bụla data n'ụzọ ka mma. EXtractor e jikọtara ya na ngwa Windows na nsụgharị iPhone.
Sitesucker bụ usoro Mac nke na-enyere aka weghachite weebụsaịtị ma na-eweta mgbanwe na njikọ Ịntanetị gị. Ọ nwere ike ịmepụta akwụkwọ, foto, ụdị akwụkwọ na PDFs na draịvụ ike gị maka iji ọrụ ntanetị. Naanị ị chọrọ ịbanye URL na interface SiteSucker, ọ ga-ebudata data chọrọ. Usoro a chọrọ Mac os X 10.11 ma bụrụ nke a ga-ebudata na ebe nrụọrụ weebụ SiteSucker.
4. Ebe nchekwa:
Ngalaba nchịkọta bụ otu n'ime ihe kachasị ike ma dị irè ngwa ntinye ihe nchọgharị weebụ s. Ọ na-arụ ọrụ ma na offline ma na ntanetị ma nwee ike ịmepụta otu ebe nrụọrụ weebụ ugboro ugboro, tinyere faịlụ nkwado ya dị ka ndịna-emeputa, ibe, faịlụ dị mma, na vidiyo. Ngwaọrụ a nwekwara ike ijide faịlụ site na saịtị dị iche n'otu oge ahụ, na-azọpụta ọtụtụ oge na ike. O kwekọrọ na ASP gị, PHP, Cold Fusion na JR n'asụsụ ndị nwere ike ime ka ha ghọọ HTML. Usoro mmemme a na-arụ ọrụ na Windows 7, Vista, XP, Windows Me, na Win98.
Nchọgharị nchọgharị ọhụrụ nke Blue Squirrel a na-akpọ WebWhacker 5. Ọ nwere ike idetuo saịtị zuru ezu na diski ike gị maka ndị na-anọghị n'ịntanetị ma na-eje ozi dị ka ọzụzụ saịtị maka ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ. Ọ dị mfe ịtọlite ​​ma na-echekwa data gị mgbe niile maka àgwà, ịhazi na imelite ya dị ka ihe niile ị chọrọ. Ọzọkwa, WebWhacker nwere ike ichikota ndekọ ndekọ nke saịtị gị yana dakọtara na Vista, XP na Windows 7.